Xafiiska dhimashada - Geofumadas
Ku dheji dhibcooyinka, khadadka iyo qoraallada polygonal laga bilaabo Excel ilaa AutoCAD
Waxaan hayaa liiskan iskuduwaha ee 'Excel'. Kuwaas waxaa ku jira iskuduwaha X, isku-duwidda Y, iyo sidoo kale magac loogu talagalay cirifka. Waxa aan rabo waa inaan ku sawiro AutoCAD. Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonnaa fulinta qoraallada qoraalka isku duuban ee Excel. Isku xir amar si aad u geliso qodobbada ...
AutoDesk Xafiiska dilaaga ah
Geli khariidad ku taal Excel - hel isku-duwaha juqraafi - iskuduwaha UTM
Map.XL waa codsi kuu oggolaanaya inaad geliso khariidad Excel oo aad si toos ah uga hesho iskuduwaha khariidada. Intaas waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale khariidada ku muujin kartaa liis ay ku qoran yihiin latitude iyo longitude. Sida loo geliyo khariidada Excel Marka Barnaamijka la rakibo, waxaa lagu darayaa tab kale oo dheeri ah oo loo yaqaan "Khariidad", oo leh shaqooyinka ...
Google Earth Xafiiska dilaaga ah
Cartografia, Google Earth / Maps, aragti ugu horeysay
Paste isbiriidhshiit ah oo wuxuu galay AutoCAD, taas oo si toos ah u cusbooneysiin
In kasta oo aan u tagi karno barta, tilmaamaysa in Xafiiska Dhoofiyuhu yahay aalad ay ku xirmi karaan xaashiyaha 'Excel' ama 'Word file', iyo in tan si firfircoon loo cusbooneysiiyey markii feylkii asalka ahaa wax laga beddelay, taariikhda sida koontada Brendan Haggerty ay tahay qaabkeyga ...
Dwg Xafiiska dilaaga ah
Ka soo dhoofso iskudhafyada 'Excel' ilaa QGIS oo abuuro Polygons
Mid ka mid ah howlaha joogtada ah ee isticmaalka Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed waa dhismaha lakabyo kala duwan oo laga helo macluumaadka ka imanaya goobta. Haddii ay tani meteleyso iskudhafyo, dhagxaan jireed ama shey sare, macluumaadka badanaa wuxuu ku yimaadaa faylal kala-jaban ama jaantusyada 'Excel' ...
Xafiiska dilaaga ah QGIS
Microstation: Iskuduwaha soo dejinta iyo qoraallada laga soo qaado Excel
Kiiska: Waxaan hayaa xog la soo aruuriyay oo leh GPS Promark 100, oo la adeegsanayo codsiga GNSS ee ka dambeeya ee ay unugyadan leeyihiin, waxay ii ogolaaneysaa inaan u diro macluumaadka Excel. Tiirarka lagu calaamadeeyay huruudda ayaa ah iskuduwaha bariga iyo woqooyi iyo qeexitaankooda; inta soo hartay waa macluumaad la xiriira dib-u-shaqeynta ka dib. Dhibaatada: Waxaan ubaahanahay dadka isticmaala inay ...
Bentley Systems Xafiiska dilaaga ah
GPS / Qalabka, Microstation-Bentley
Template-kaan 'Excel' waxaa markii hore loo sameeyay si loogu beddelo iskuduwaha juqraafi UTM, laga soo bilaabo qaab jajab tobanle illaa darajooyin, daqiiqado iyo ilbiriqsiyo. Kaliya ka soo horjeedka shaxanka aan horey u sameynay, sida lagu arkay tusaalaha: Intaa waxaa dheer: Waxay isku xirtaa xarig Waxay u rogeysaa isku-duwaha UTM, iyada oo ikhtiyaarka lagu dooran karo ...
Sida loo helo email dibadda ah oo laga helo Gmail adoo isticmaalaya POP3
Qodobkaan waxaan ku arki doonaa sida loo qaabeeyo POP Gmail. Kuwa safarka badan ama u baahan inay ka helaan emayl kombiyuutaro kala duwan, adeegsiga macmiilka Microsoft Outlook runtii waa wax laga xumaado; In kasta oo ujeeddooyin hay'addeed ay u dhowdahay lama huraan, ka dib marka la ogaado Gmail-ka waxay dareemeysaa sida nin god-madow ah oo adeegsanaya Muuqaal horumar yar sameeyay ...
U hagaaji xigashooyinka caqliga leh ee xigashooyinka toosan ee Microsoft Word
Tani badanaa waa dhibaato, markaan wax ka bedelno qoraalka HTML ee Microsoft Word ama Live Writter. Dhibaatadu waa koodh sida su'aalo qariib ah oo ku saabsan teknolojiyada CAD Waxay na siin doontaa dhibaato, maadaama calaamadaha oraahyada ee aan qabsanno ay tahay inay noqdaan kuwa toosan sida soo socota: Su'aalo qariib ah oo ku saabsan tikniyoolajiyadda CAD Markaan dooneyno inaan ku beddelno ...
Sida loo sameeyo index toos ah Microsoft Word
Microsoft Word badanaa waa mid ka mid ah barnaamijyada aan baranay inaan isticmaalno iyadoo aan koorso la qaadan. Adoo gujinaya oo galaya waxaan ogaanay in loo isticmaalo sameynta dukumiintiyada, inay miisas leedahay, in miisaska ay soo koobaan sida Excel iyo inay waxyaabo qaali ah ku hayaan shaashadda Word Perfect buluug. Ma uusan ...
Muuji feylasha dhowaantan, Word iyo Excel
Intabadan ayay nagu dhacdaa, inaan ilaawno halka feyl lagu keydin jiray. Mararka qaarkood waan ku wareejineynaa, waxaan ku fureynaa faylka soo dejiyaha biraawsarka ama si fudud mashiinka raadinta Windows-ka ee duugoobay waa masiibo. Hagaag, haddii faylkaasi ka mid yahay 50-kii ugu dambeeyay ee aan furnay, sida ugu dhaqsaha badan ayaa ah in laga arko ...
Sida looga saaro lambarrada 'Excel' iyo 'hyperlinks' lambarrada 'Excel'
Marar badan markii aad ka min guurineysid xogta Internetka illaa Excel, lambarradu waxay leeyihiin koomayaal kumanaan kala sooc ah. Xitaa haddii aan u beddelno qaabka unugga lambarka, weli waa qoraal maxaa yeelay Excel ma fahmi karo kumanaanka kala-bixiyaha ka dib markii shaxdu leedahay 6 lambar, taas oo ah, in ka badan milyan. Waan sameyn doonaa
Internet iyo Blogs, dhowr
Sidee loo barbardhigaa Dukumentiyada Word
Marar badan ayay nagu dhacdaa, inaan ka shaqeyno dukumiinti, ka dib qof ayaa beddelaya isaga oo aan calaamadeyn dib u eegista isbeddelada isla markaana goor dhow ama goor dambe ayaan ku mashquulsanahay isbarbardhiga labada. In kasta oo aan marar dhif ah wax ka qoro barnaamijyada loogu talo galay dadka kaliya, haddana waxaan ka faa'iideystaa fursaddan maxaa yeelay shaqadan waxaa lagu soo daray Microsoft Word, waxaana lagu sameeyaa ...
kiiska warqad Change la Microsoft Word iyo ka badan
Ereyga 2007 iyo xariggiisa, sida AutoCAD, ayaa waxyaabo aan xakamayn lahayn nooga reebay markaan degdegayno. Dhibaatada aan raadinayay inaan u beddelo qoraalka ka yaryar iyo kan weyn, kaas oo ahaa hal guji ka durugsan menu ka hor. Wax fikrad ah kama haysto meesha ay ku taallo, haddii ay halkaas joogtona ma aanan haysan samir igu filan, sidaa darteed waxaan ...
Muddo ka hor ayaa tan la i weydiiyay, maaddaama saaxiibku u muuqdo inuu yara deg degay oo maanta ay tahay maalin loo dabaaldego waxyaabo badan, halkan waxaa ku yaal qalab kuu oggolaanaya inaad u beddesho iskuduwaha juqraafi, darajooyinka illaa tobanleyaal. Waa maxay sababta miiska badalashada Waa wax iska caadi ah, in la helo iskudhafyo ku jira darajooyinka qaabka, daqiiqadaha, ilbiriqsiyada, ...
MapinXL, khariidadaha laga bilaabo Excel
MapinXL waa codsi ay dhistay ARTICQUE, oo loogu talagalay dadka xafiiska jooga, oo aan ahayn khabiiro GIS laakiin doonaya inay ku qancaan khariidado midab leh. Waxaan nolosheena ku qaadaneynaa inaan rabno inaan ku xiro khariidadeheena Excel, waxaan ka warqabnaa in kuwa kale aysan ka fogaan karin xalka Microsoft; taasna waxaan u samaynay kun ...
Sidee loo ogaadaa furaha ereyga
Waxaa jira aalado kala duwan oo internetka ah oo kuu oggolaanaya inaad heshid sirta sirta ah, ama sida ugu wanaagsan ee aan maanta ugu yeeri doonno: lambarka sirta ee feyl, uguma talagalin qoraalkan inaan ku dhiirrigeliyo xumaanta; Saas ma aha, sharrax halista jirta iyadoo la rumaysan yahay in dhammaan xogteenna loo ilaaliyo hab fudud oo ka dambeeya magaca jacaylka ...